ကံ့ကော်နီ – Pann Satt Lann Books
ကံ့ကော်ပင်ကြီးက မြေမှာပေါက်နေခြင်း မဟုတ်။
ရေတွင်းပျက်ကြီးထဲက ထိုးထွက်နေခြင်းဖြစ်၏။ ကံ့ကော်ပွင့်က တစ်ပွင့်တည်းသာ ကျန်တော့သည်။ အနားကပ်သွားပြီး ခူးမယ်လုပ်တော့ ကတ်ပြားလေးတစ်ခု ချိတ်ဆွဲထားတာ တွေ့ရသည်။
‘ပိုင်ရှင်ရှိသည် .. မခူးရ’
သူစိတ်ပျက်ပြီး ပြန်အလှည့်တွင် သူ့ရှေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ရပ်စောင့်နေသည်။ ထိုသူ၏ မျက်နှာရှေ့မှာ ရေခိုးရေငွေ့တွေလို အရာများက ကာရံထားသဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရ။ ထိုသူက –
“နင့်ဆန္ဒအတိုင်း ငါ့မျက်နှာကို ဘယ်တော့မှ မမြင်မတွေ့စေရဘူးလို့ ကတိပေးခဲ့တာကို ယုံပြီ မဟုတ်လားဟင်” ဟု ပြောသည်။ မျက်နှာကို မမြင်ရပေမယ့် အသံကိုတော့ ကြားရတာပဲ။ သည်အသံကို မှတ်မိသည်။ ထိုသူက –
“နင့်ကို ငါ ပန်းပေးပါတယ်” ဆိုပြီး ကံ့ကော်တစ်ပွင့် လှမ်းပေးသည်။ သူ့လက်ထဲက ကံ့ကော်ပွင့်သည် အဖြူရောင်မဟုတ်။ အနီရောင်။
ကံ့ကော်နီ ? …
စိုးချစ်၊ ခင်မေတင့်၊ မေရီအောင်တို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းရိုးရိုးလေးကို ဆရာမင်းလူရဲ့ ကလောင်စွမ်းနဲ့ ကာလဒေသနောက်ခံ ကံ့ကော်ပင်ကြီးနဲ့ ရေတွင်းပျက်ကြီးရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ကျောင်းတက်ဖော် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ခြံရံလိုက်တော့ အလွန်ပင် ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ ‘ကံ့ကော်နီ’ ? ဖြစ်လာရပါတယ်။
5.3 x 0.3 x 8.4 inches
ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာပေ၊ 2020 အောက်တိုဘာလ (စတုတ္ထ-ကြိမ်)
1.11.2021 နေ့မှစတင်၍ မူရင်းထုတ်ဝေတိုက်မှ ကျပ် ၃၂၀၀ စာအုပ်စျေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ကံ့ကော်နီ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 1 ရှိပါသည်။
Ye Htet Aung – January 2, 2021
ကံ့ကော်ပင်ကြီးရယ် ရေတွင်းပျက်ကြီးရယ် ကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်။
ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမဟုတ်ပဲ မတော်တဆ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားရင်းကနေ တကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်နေမှန်း ဝေးသွားမှ နားလည်ခဲ့တဲ့ စိုးချစ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက ရခဲ့တဲ့ ကံ့ကော်ဦး နဲ့ ရည်းစား စာကြောင့် ကံကောင်းဆုံး မိန်ကလေး အဖြစ်ကနေ လူမှားပြီး အချစ်ခံ ခဲ့ရမှန်း သိခဲ့လို့ အကုန်လုံးကို စိတ်နာပြီး အားလုံးနဲ့ဝေးရာမှာ နေခဲ့တဲ့ ခင်မေတင့်။
လှလှပပ ကျော့ကျော့ရှင်းရှင်းနေတတ်ပြီး ချစ်သူရည်းစားထားရတာကို မကြိုက်သော်လည်း စိုးချစ်အပါအဝင် ယောက်ျားလေးတိုင်းရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှု ကိုခံရပြီး မိမိကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စိုးချစ်နဲ့ ခင်မေတင့်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မသိခဲ့ရတဲ့ မေရီအောင်
သူတို့ ၃ ယောက်နှင့်အတူ ကျော်ဇင်ဦး မင်းသီဟ နန်းမွှေး ဝိုင်းဝိုင်း တို့ စတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ ငယ်ဘဝကနေ အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ ခင်မင်မှု ဇာတ်လမ်းတို့ကို ဆရာ မင်းလူရဲ့ အရေးအသားကြောင့် ကံ့ကော်နီရဲ့ စာအုပ်က မပျင်းစေပဲ နောက်ဆုံး အထိ ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်း တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကံ့ကော်နီ စာအုပ်ထဲမှ ဆရာမင်းလူရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အရေးအသား တစ်ခု ” သူ အရက်သောက်ရတာ ခင်မေတင့်ကို မေ့သွားအောင်လို့လည်း မဟုတ်၊ အရက်သောက်ပြီးလျှင် ခင်မေတင့်ကို လွမ်းလို့ ပိုကောင်းသောကြောင့်သာ ဖြစ်၏။ အသည်းကို ကဗျာထဲမှာပဲ စိမ်ထားပြီး၊ အလွမ်းကို အရက်ထဲမှာ စိမ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် ပိုမှန်လိမ်မည်ဟုထင်သည်။” ဆိုတာပဲ။
အဲ့ဒါကြောင့် ဆရာမင်းလူရဲ့ ကံ့ကော်နီ က ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအပြ်တစ်အုပ်ပါပဲ။